I-Breck 1 BDR Condo- I-Balcony, Ubhavu Oshisayo Nendawo Yokupaka Yamahhala - I-Airbnb
I-Breck 1 BDR Condo- I-Balcony, Ubhavu Oshisayo Nendawo Yokupaka Yamahhala
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Blake
Ngo-80 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Blake Ungumbungazi ovelele
Le condo yokulala eyi-1 itholakala enhliziyweni yeBreckenridge! Ungaphesheya komgwaqo ukusuka ku-Peak 9 Quicksilver chairlift futhi uqhelelene nezindawo zokudlela nezitolo kuMain Street. Lesi sakhiwo sisidala, kodwa sinezinsiza ezinhle njengendawo yokupaka egalaji elilodwa, i-balcony yangasese, kanye nobhavu oshisayo okwabelwana ngawo. I-Mi Casa (ihora lenjabulo elingcono kakhulu e-Breck) kanye nesitolo se-ski/amabhayisikili kutholakala esakhiweni. Ungakwazi ukupaka imoto yakho egalaji futhi ungaphinde uyisebenzise ngesikhathi sokuhlala kwakho (noma uthathe i-shuttle esuka ku-DIA)!
Uyemukelwa endlini yethu yokulala eyi-1 etholakala esakhiweni saseDer Steiermark edolobheni laseBreckenridge. I-condo ingakwazi ukuhlalisa izihambeli ezifika kwezine ezinombhede wendlovukazi kanye nosofa wokudonsa onomatilasi wegwebu lokukhumbula. Sizame konke okusemandleni ethu ukuhlinzeka ngosofa wokudonsa okhululekile njengosofa wokudonsa. Kulabo abafuna ukuhlala futhi bapheke, kunekhishi eligcwele elinazo zonke izinto ezidingekayo. Kunendawo yomlilo evuthayo enezinkuni ezitholakalayo kanye novulandi wangasese obheke iPark Avenue.
Isakhiwo sidala, kodwa sinazo zonke izinsiza ozidingayo uma uye eholidini lezintaba. Kukhona indawo yokupaka egalaji eshisayo yemoto eyodwa (7 ft. 2 inch clearance). Ngezinyanga zasebusika (November-May) i-AWD noma i-4WD iyadingeka ukuze ufinyelele ngokuphephile egaraji futhi ushayele uzungeza idolobha. Kukhona ubhavu oshisayo okwabelwana ngawo otholakala nsuku zonke kusukela ngo-1:00-9:00 PM. Uma undizela esikhumulweni sezindiza sase-Denver International, ngincoma kakhulu ukuthi uthathe i-Epic Mountain Express uqonde ngqo e-condo futhi akumele ubhekane nemoto!
I-wifi esheshayo – 80 Mbps
I-Der Steiermark itholakala nje eduze komgwaqo omkhulu noPark Avenue edolobheni iBreckenridge. Indawo iphakathi kwe-Quicksilver Peak 9 ski lift e-Village nase-Main Street. Ingxenye engiyithandayo ngeDer Steiermark ukuthi ungahamba uye kuyo yonke into eyenza iBreckenridge ibe mnandi!
Ngihlala e-Denver, kodwa ngenza umgomo wokuthi ngitholakale ezivakashini zami ngenkathi ngizisingatha. Zizwe ukhululekile ukuthumela i-imeyili, umbhalo noma ukushayela noma yimiphi imibuzo. Ngingancoma uhambo lwezinsuku, ukuqashwa kwe-ski, namanye amathiphu ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise kakhulu!
Ngihlala e-Denver, kodwa ngenza umgomo wokuthi ngitholakale ezivakashini zami ngenkathi ngizisingatha. Zizwe ukhululekile ukuthumela i-imeyili, umbhalo noma ukushayela noma yimiphi…
UBlake Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 344000002